(Sheekadan Waxa SDWO.COM ka Akhriyey in ka badan 140 kun oo qof)
Qaybtii 10aad Waxay inoo joogtay Hooyo Ruun oo Buraanbur Duco ah u tirisay Inanateeda Salma Waxayna tidhi:
Cawo kuma haleelo hooyo,
Oo laguma ciilo weligaa,
Cimrigaagu noqoy kii cisi leh,
Alla kuma celiyo
oo curad raagta noqo,
Cawo iyo nasiib
caadil kuugu deeq,
Ha car-caraafin oo
rays cagaha la gaadh,
Illaah baan kuu cugtee
caano iyo guri nabdoon,
Cudooneey hooyo khayr ku waar
Hooyo Ruun markii ay tixdaa buraanburka ah ee ducada ah, qac ka siisay ayey odaygeedii la hadhaysaa, waxayna ku tidhi: "Xaaji Abtidoonow, waa tii la yidhi shuruudi aabahaa ka weyne maxaynu yeelnaa oo inooga ballan ah, wiilka ay gabadheenu inoola timaado, ee ay ina tidhaahdo wiilkan ayaan doonayaa oo aan guursanayaa, ma kula tahay in aynu raacino oo aynaan wax hadal ah ka keenin, oo aynu isu dayno iyada iyo nasiibkeeda ducona u raacino."
Xaaji Abtidoon oo ka jawaabaya hadalka islaantiisa ayaa isna yidhi: "Ruuneey, hadal kale ma jiree, maanta wiilka ay gabadheenu inoola timaado waynu u hibaynaynaa, ducona waynu u raacinaynaa, ballanteenu waa taa."
Oday Xaaji Abtidoon iyo Islaantiisii waxay isla qaateen inay gabadhoodu wiilka ay calmato ee ay ula timaado inay ugu duceeyaan Salma markii ay ka dhaqaaqday labadooda waalid oo daarada hore ee guriga fadhiya waxay gashay qolkeedii gaarka ahaa waxayna markiiba telefoon kula xidhiidhay Subeer oo isna qolkiisii jooga dabadeedna bahal sheeko ah oo xiiso leh ayaa la haloosiyay.
Salma markay telefoonka dhegta ku hayso waxaad moodaa inuu Sayloon ku rikiban yahay jidhkeeda, waaayo intay madaxa telefoonka beerka la dhigtay ayay dareenkeeda oo dhan siisay dhagaysiga weedhaha Subeer u soo marrinayo khadka telefoonka oo ay aad u macaansanaysay taasoo aad dhaq-dhaqaaq yaraanteeda aad moodo sidii qof suuxsan oo aan darreenkiisu waxba ogayn Salma waxa qalbigeeda iyo sambabadeeda saaqay Subeer oo ku afuufay weedho macaan badan oo ka soo burqanaya mawjado gaaxsanaa oo jaceyl ah.
Subeer qolkiisa ayuu hoosta ka xidhay wuxuuna gabdhahooda ku yidhi "cidkastoo I doonaysa ma joogo ku dhaha."
Subeer sidii qaalin geel ah oo curatay ay ilmaheeda uga ilaaliso bahalada iyo cid kastoo u soo dhawaata ayuu telefoonkii dul fadhiistay oo uu hareeraha qabsaday kadibna intuu madaxii telefoonka dhegaha la yoomay ayuu sariirta dusheeda la dhabcay, wuxuuna dareenkiisa oo dhan u hibeeyay dhegaysiga weedhaha uu macaansanayo ee ay Salma u soo marrinayso khadka telefoonka iyo u hal calinteeda wakhtiga la wada hadlayaa waa goor galab ah oo qoraxdu casar gaaban joogto oo ay laydh qaboobina dhacayso.
Salma tan iyo intii ay dalka dib ugu soo noqotay habeen qudha hurdo si fiican uma ladin waayo waxa dareenkeeda ku oognaa ugu yaraan dhawr arrimood oo ay ugu horreeyaan sidii ay warqadeeda uga heli lahayd Mursal iyo sidii ay mar kale niyadiisa iyo rabitaankiisa u kasban lahayd ninkii uu waayaha jaceyl dhex maray ee ay ku wacad furtay (waa Subeere).
Hase yeeshee Salma waxay soo gaadhay xili ay xaaladeedu u muuqato inay labadii duruufood ee dareenkeeda aad u xaganayay ka soo gudubtay sidaa darteed Salma markii ay maalinimadii u warantay aabbaheed iyo hooyadeed, isla markaana ay galabnimadii telefoonka isku waraysteen Subeer, habeenimadii si fiican ayey dhinaca dhulka u dhigtay, waxayna seexatay hurdo aanay iskadaa maalmo iyo bilo oo xataa aanay seexan labadii sannadood ee u dambeeyay. Sidaas darteed habeenkaa mar qudha iskama ay rogin dhinacii ay u jiifsatay fiidkii hore.
Salma maadaama ay habeenkaa ku seexatay jawi xasiloon oo ay hurdada si fiican uga bogatay waxay subaxnimadii la soo toostay dareen firfircoon iyo furfurnaan aan in dhowayd lagu arag.
Sidaa darteed goor hore ayay ku fooftay hawshii gurigooda, waxkastana jac iyo mac ayey ka siisay.
Salma waxay maalintii oo dhan adeeg hufan iyo firfircooni dheeraad ah gurigooda kaga shaqaynaysayba waxa la soo gaadhay xilligii kala wareega maalinta iyo habeenka oo ah aminta makhribka loo yaqaan, iyadoo ay habeenimada soo galaysay Salma ballan la leedahay Subeer. Hase yeeshee Salma maaha qof goor dambe ku hambaabareysa ballantii ay lahayd ee casar dheere ayay hoosta ka diyaar garowday.
Wuxu wakhtigu isguraba waxay amin-sheegtu ku dhawaatay 7:00 fiidnimo, sidaas darteed waxa soo dhowaaday xilligii ballanta. Dabadeedna, Salma iyadoo ay dhawr miridh ka hadhsan tahay xilligii ballanta ayay ka soo booday gurigooda. Waxayna afka saartay goobtii ballanta.
Toddobadii fiidnimo oo hal miridh dhiman ayey Salma isa soo taagtay goobtii ballanta. Sidoo kale Subeer oo isna maalintii oo dhan istaanbay u ahaa ballanta ayaa miridh ka dib markii ay Salma timi, isna isa soo taagay goobtii ballanta isaga oo wata baabuurkiisii. Dabadeedna way is raaceen waxayna u kaceen hudheelkii ay habeenkii hore ku sheekaysteen.
Habeenkaa waxa casuumada fidiyay Subeer, halka ay habeenkii hore Salma casuumada qaabishay. Cabaar markii ay Salma iyo Subeer baabuurka ku soo dhex sheekaysteen ayey soo gaadheen hudheelkii waxayna fadhiisteeen goobtii loo diyaariyay.
Marka la isu eego labada habeen way ku kala duwan yihiin labada qof, waayo habeenka dambe ayey Subeer iyo Salma ka farxad iyo yididiilo badan yihiin habeenkii hore, taas oo ay ugu wacan tahay horumarka ay ka gaadheen dib u noolaynta xayaatadoodii caashaq ee naafowday.
Sidaa darteed, habeenkaa waxa Salma iyo Subeer wejiyadooda ka muuqda farxad, qushuuc iyo qalbi degan. Markii ay Subeer iyo Salma Salka dhigeen kuraastii iyo miiskii loo dhigay waxay bilaabeen sheeko is-xaalwaraysi ah, taas oo ay wax iska waydiinayaan bal waxa arrimahooda ku soo kordhay labadii caano maal ee ay kala maqanaayeen.
Subeer oo u muuqday nin u hamuumaya inuu ogaado bal waxa ay ku dhamaatay sheekadii dhex martay Salma iyo waalidkeed ee la xidhiidhay qadiyadooda ayaa markii ay fadhiisteen hadalka bilaabay wuxuuna yidhi: "Walaal Salma bal ii waran, intaad wax ii taataabatay ayaadan haddana ii bal balaadhinine, iiga waran sheekadii idin dhex martay adiga iyo labadaada waalid, sidee bay u arkeen qadiyadii aad u ban dhigtay."
Salma ayaa hadalka qaadatay, Waxayna tidhi: "wallaal Subeerow, hayga deg degin si faah faahsan ayaan sheekadaa kaaga dherginayaaye, balse waxa laga yaabaa haddii aynu hadda bilowno inay inala dheeraato'e, ma kula tahay inaynu horta cashayno, kadibna marka aynu cashada ka soo fan-jeedino si fiican u sheekaysano."
markii ay Salma tidhi, intaynaan is waraysan horta aynu cashayno, kadibna aynu sheekaysano ayuu Subeer ugu jawaabay, "Gacaliso Salmaay Cuntada warkaagaan uga baahi iyo boholyow badnahay oo raashinka u hamuumi maayo ee waxaan u hamuumayaa sidii aan uga haqab beeli lahaa warkaaga iyo xaaladaada."
Markii uu Subeer sidaa yidhi, Salma waxay go'aansatay inay waxoogaa war ah u yara qadinto, waxayna tidhi: "Subeerow haddii aan kuu sheego wixii aan aniga iyo waalidkay is nidhi iyo halkii ay arrini isugu biyo shubatay, marka hore, waxaan oga waramay in aanu aniga iyo Mursal kala faataxaysanay oo aanu is furnay warqadaydiina uu ii soo diray, mar labaadkiina waxaan dareensiiyay in aan hadda kadib mustaqbalkayga ka shaqaynayo, aniga oo weliba u saray ama u taabtay inay dani iga hayso wiil aanu beri hore caashaq wadaag ahayn oo aanu aad isugu dheer nahay.
Dabadeed markii aanu arrinta dhinac walba ka eegnay ee aan aniguna si fiican u hoga-tusaaleeyey waxa aan damacsanahay iyo dareenkayga waqtigan xaadirka ah, waxaanu aakhrikii aniga iyo waalidkay isla qaadanay in maanta taladayda la ii daayo, taas oo waalidkay ila ogolaadeen inay iigu duceeyaan wiilkii aan ku qanco ee aan soo xusho oo ay raali igula noqdaan.
Markaa Subeerow arrintu waa sidaase maxaa ka dhiman, miyaanay intaasi kugu filnayn oo aanan anigu soo dhamayn dhinacaygii."
Subeer, ayaa isna yidhi:
"Salmaay war farxad leh ayaad ii sheegtay, aadna waad u dedaashay laakiin waxaan kuu sheegayaa warka aad maanta labadaada waalid u sheegtay ee aad ka soo dhammaysay waa warkii aad u sheegi kari wayday afar sannadood ka hor. Hase yeeshee wax badan baynu buste saarnay caashaqeenee, maanta aynu ka badheedhno oo aynu soo afjarno arrimaheena."
Subeer, isaga oo hadalkii ku dhex jira ayaa la soo hordhigay cuntadii, dabadeedna Subeer, intuu sheekadii joojiyey ayuu yidhi: "Salma fadal iyo wadaag xiise leh gacaliso."
Salma iyo Subeer, si degan oo ay farxadi hadhaysay ayey u wada casheeyeen, iyadoo ay cuntada dusheeda isku dhaafsanayaan weedho xiiso leh.
Subeer iyo Salma habeenkaasi waxa uu u ahaa habeen uga duwan habeenadii hore ee ay kulmi jireen, waayo waxay u arkayeen inay soo dhowaatay rajadoodii maalmo badan fogaatay, taas oo ay habeenkaa ku naaloonayaan yididiilo qariib ah oo agtooda soo joogsatay.
Salma iyo Subeer habeenkaa xaaladdu waxay uga dhignayd sheeko dhamaatay oo ay yihiin sidii laba qof oo aanay waxba u hadhsanayn oo nin iyo ooridii ah.
Subeer iyo Salma markii ay casheeyeen kadib waxay cabaar ku sii negaadeen goobtoodii, halkaas oo ay sheeko macaan oo la xidhiidha arrimahooda sii qaadaa dhigeen.
Hase yeeshee habeenkaa uma ay raagin sidii ay habeenkii hore u raageen. Sidaa darteed goor hore ayey ka soo baxeen hudheelkii.
Subeer iyo Salma oo ay dareenkooda hadhaysay farxad iyo yididiilo aan hore loo arag way ballameen, dabadeedna Subeer intuu Salma dhigay albaabkii gurigooda ayuu iska hoyday.
Laakiin Subeer markii uu gurigoodii tegay markiiba ma seexan waayo kar baa ku taagan, sidaa darteed wuxuu go'aansaday in inta aanu seexan inuu aabihii u sheego arrinta cusub iyo halka ay xaaladiisii guurku marayso.
Dabadeedna Subeer intuu u tagay odaygii aabihii oo qolka fadhiga ku sugan ayuu u bilaabay sheekadii, wuxuun yidhi "Aabo gacaliye, caawa ma kuu sheegaa arrin aad in badan iga sugaysay jawaabteeda."
Odaygii ayaa ugu hal celiyey wiilkiisii Subeer, "aabo ma'daba ka daayoo ii sheeg."
Dabadeedna Subeer baa sheekadii hoos ugu daadegay wuxuuna yidhi; "aabo wax badan baan ku lahaa gabadh baan soo xulanayaaye, maanta ayaan arrintaa ka sidaa go'aankii kama dambaysta ahaa.
Sidaa darteed waxaan doonayaa in aynu u tagno gabadhii aan guursan lahaa reerkooda oo ay inoo hibeeyaan."
Odaygii dhamal ee Subeer aabihii ayaa yidhi: "Aabo war wanaagsan baad sheegtaye, laakiin waa ayo gabadhu, ma tahay gabadh aan garanayo, mise waa mid aanan garanayn, bal ii sheeg ina ayadeeda?"
Subeer ayaa u jawaabay aabihii, wuxuuna yidhi; "Aabo gabadhu waa ina Xaaji Abtidoon, oo waa inantii aan berigii kuu sheegay ee aan kugu odhan jiray, gabadhii aan doonayey in aanu is guursano, waxa la siiyey nin ay il-maabti yihiin oo debedaha ka yimi, ninkaas oo markii uu guursaday debeda ula dhoofay."
Odaygii ayaa haddana yidhi: "Aabbo gabadha aad sheegayso, mee ninkii guursaday afar sannadood ka hor?"
Subeer ayaa ku jawaabay: "Aabo dhowaan bay is fureen, gabadhiina hadda magaalada ayey joogtaa oo way ka soo noqotay debedii, ninkiina wuxuu jiraa meeshii uu awalba ku noolaa oo ahayd Jarmalka wuxuuna qabaa naag kale."
Odaygii ayaa haddana hadalkii la wareegay oo wiilkiisii ku yidhi:
"Aabo Subeerow, ma waxaad doorbiday inaad guursato gabadh carmal ah oo afar sannadood la qabay, maxaa kuu diiday inaad guursato gabadh yar oo aan faro gaadhin, maxaase kaa hortaagan inaad gabadh timo-tidcan ka xulato waxa gabadh qurux badan Magaalada dhex mushaaxaysa. Maadse ilowsan tahay in ay gabadhani tahay tii burburisay farxada gurigeena afar sanno ka hor marka laga yimaado adiga oo dhibaatada inta ugu badani gaadhay, ma waxaanad dareensanayn dhibaatada gaadhay reerkeena inta kale oo aan ilaa hadda uga baqo qabo in ay saamayso gabdhaheena.
Aabo waan ogahay in uu jaceylku jiro laakiin ma qabo in wakhtigan uu jaceyl kuu qaban karo gabadha caynkaas ah arrinkaa aad I waydiisayna haddii aan ku dhalay oo aad in badan baan ku dhegaystee warkayga maqlayso, waxa iga go'aan ah oo aan ku leeyahay in aad raadsato gabadh kale.
Dhamal isaga oo sii faahfaahinaya ujeedooyinka uu ku diidan yahay gabadha wuxu yidhi:
"maaha ceeb in ninku guursado gabadh ka weyn isla sidoo kalena waa suuragal in wiilka dookhiisu noqdo gabadh garooba (Carmal) laakiin waxan marnaba suuragal ahayn in ay gurigeena soo gasho gabadhii aad ogayd sida ay inoo gashay.
Subeer ayaa hadalka aabihii kaga jawaabay:
"Aabo gacaliye, maan waayin gabadh kale iyo gabadh ugub ah toona laakiin naftaydu waxay rabtaa gabadhan, mana jirto cid aan ku doorsanayaa, iyadoo aan aaminsanahay in aanay dhulkeenaba ku noolayn gabadh la qiime ah oo u dhigantaa, sidaa darteed aniga iyada ayuun baa I cajebisay, mana jirto gabadh aan iyada ahayn oo ii cuntamaysaa, waxayna gabadhani ahayd gabadhii u horaysay ee aanu is doorano, ee aanu jacayl wadaag noqono, mana jirto gabadh kale oo ay indhahaygu arkayaan, markaa aabo ii ogolow gabadhaa ayaan soo xushaye, isla markaana aynu dhakhso ugu tagno reerkooda oo u sheegno in aynu gabadha ka guursanayno."
Oday Dhamal ayaa dabadeed haddana yidhi:
"Aabo Subeerow, waxaan ahay nin weyn oo caqli iyo aqoon leh, markaa waan garanayaa rabitaanku waxa uu yahay waanan fahamsanahay inay labo qof isjeclaan karaan oo uu jacaylku yahay wax jira, balse aabo waa goor dambe sidaa darteed arrintani ma aha mid si sahlan aan u yeeli karo sidoo kalena waxan u maleynayaa in aanad aabo fayoobayn ee waxan ku siinayaa muddo saddex cisho ah oo aad kaga soo fekerto arrinkaagan kuumana oggolaan doono anigoo intaa kugu soo tabcay kuguna ogayn wax iin ah oo aan kuugu oggolaado gabadhaa."
Subeer, oo aad uga werwersan sida qotoda fog ee uu aabihii uga soo horjeedo arrrinkiisa talona ku caddaatay ayaa isaga oo aan geesnaba eegin ka dhaqaaqaya halkii ay ku wada hadlayeen isaga iyo aabihii waxaanu si cago-jiida u gelayaa qolkiisa, waa habeen gelinkii hore ahaa nin farxadeed aad moodana in uu ku soo gebageboonayo si murugo leh, wakhtigaa iska caynkaas ah oo waayahaa dhibkiisa wata horaa loo yidhi:
Marbuu kuu wanaajiya
Wakhtiguu kuu hiiliyaa
Wallaakii kaa dhigaa
Sidii waqal kuu da'aa
Marbaad kala weecataa
Wacdiga aad aadmiga fartaa
Marbuu wadhi kuu dhalaa
Adduunyooy waayo badan
Werwareeg maanigaa ku idhi
Fartiyo wadnahaan isku hayaa